Ipolisi Yeepati Nemicimbi - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ipolisi Yeepati Nemicimbi
Phawula: Ukususela nge-20 ka-Agasti 2020, uAirbnb wazisa ukuba akazivumeli iipati namatheko enziwa kwizindlu zika-Airbnb emhlabeni wonke, waza wabeka nomda wabantu abanokuhlala babayi-16. Iipati azizukuvumeleka qho kubhukishwa kuAirbnb kwixesha elizayo, ibe zizohlala zingavumelekanga side senze esinye isaziso kwakhona.
Imilinganiselo Yentsapho yethu ayiwavumeli amalungu Entsapho yakwa-Airbnb ukuba enze into ephazamisayo kwingingqi yawo. Ababuki zindwendwe neendwendwe banokuyifikelela le milinganiselo ngokuqiniseka ukuba bayavumelana ngezinto ezilindelekileyo kwimicimbi eyenziwa kwizindlu. Ngoxa sikholelwa ukuba iindwendwe ezininzi ziyathobela, senze ipolisi yethu Yeepati Namatheko ukuze sinikezele ngokhokelo olucacileyo ngento esiyilindeleyo kumntu wonke. Kude kuphindwe kwaziswe, le polisi ayikuvumeli:
Ukudibana kwabantu abangaphezulu kwabayi-16
Zonke iipati namatheko aphazamisayo
Iindwendwe ezixelwe ngenxa yokwenza ipati ephazamisayo okanye ukwaphula imithetho yethu yokudibana kwabantu abangaphezulu kwabayi-16 zisenokunqunyanyiswa okanye zisuswe kwiwebhusayithi ka-Airbnb. Kwezinye iimeko, izimvo zeendwendwe ezibhalwe emva kweepati ezilolu hlobo zisenokususwa. Singazisusa nezindlu ukuba sigqiba ekubeni umbuki zindwendwe uvumele ipati eyophula le polisi. Ukuba sixelelwa ukuba indlu iphazamisa ingingqi ekuyo, sisenokucela ukuba umbuki zindwendwe alungise imithetho yakhe okanye siyinqumamise indlu.
Ukongeza ekuqiniseni imithetho yethu yeepati, sisebenzela ekubeni siziphelise iipati eziphazamisayo ngaphambi kokuba ziqalise ngokuqinisa ubuxakaxaka bethu obukwazi ukuqonda umngcipheko.
Ukudibana kwabantu abaninzi
Kude kuphinde kwaziswe, ukudibana kwabantu abangaphezulu kwabayi-16—kuquka iindwendwe eziza kulala nezimenyiweyo—akuvumelekanga, nokuba umbuki zindwendwe uvumile.
Kude kuphindwe kwaziswe, zonke iipati namatheko aphazamisayo awavumelekanga, nokuba bangaphi abantu. Iindwendwe ezenza ezi ntlobo zamatheko zisenokususelwa iiakhawunti zazo ibe ababuki zindwendwe abophula lo mthetho baze bavumele iindwendwe ukuba zenze iipati basenokufumana imiphumo kwiiakhawunti zabo ukuya kutsho ekususweni kwezindlu zabo.
Xa abantu abakwindlu ekuAirbnb bephazamisa—enoba bangxola kakhulu, banepati ephazamisayo, kudibene abantu abangaphezulu kwe-16, okanye benza izinto eziyingozi—abantu basekuhlaleni banokubaxela Uncedo Lwengingqi, lunelinki engena kwiinkonzo zongxamiseko zasekuhlaleni. Banako nokufumana inombolo yefowuni yeqela Loncedo Lwengingqi, apho banokuxela ipati esaqhubekayo. Xa ingxaki ixeliwe, uAirbnb uza kuthumela i-imeyile yokuqinisekisa ecacisa ukuba yintoni elandelayo eza kwenzeka.
Izikhokelo zezinto ezikwindlu
Ngokuhambiselana nale polisi, ababuki zindwendwe abafanele batsale iipati namatheko aphazamisayo kwizindlu zabo ngokuthi izindlu zabo zizilungele iipati okanye amatheko. Ngokufanayo, ababuki zindwendwe abafanele bathi izindlu zabo zikulungele ukudibana kwabantu abangaphezulu kwabayi-16.
Izindlu ezaphula le mithetho kwisihloko sendlu, ingcaciso, imithetho yekhaya, iifoto, njl., zisenokunqumamiswa ide loo nto yaphula umthetho isuswe. Xa sifumene izikhalazo zokuba indlu yaphula lo mthetho, sisenokuyinqumamisa nendlu ukuya kutsho kwiintsuku eziyi-30 size sicele umbuki zindwendwe ukuba alungise indlu yakhe ukuze iquke umthetho ochaza ngqo ukuba iipati namatheko awavumelekanga.
Kwiimeko ezinqabileyo apho kungathi indlu yenzelwe kuphela ukuba neepati okanye amatheko (ngokomzekelo, iindawo zeepati okanye amatheko), okanye apho indlu iphazamise kakhulu ekuhlaleni, indlu leyo isenokususwa ngokupheleleyo kuAirbnb.
Imithetho esebenza kwiintlobo ezahlukeneyo zezindlu
Iimeko zokubuka iindwendwe eziqhelekileyo
Sibathembile ababuki zindwendwe beendawo zokubuka iindwendwe eziqhelekileyo (njengeehotele) ukuba bazibekele eyabo imithetho yamatheko. Ababuki zindwendwe beendawo eziqhelekileyo zokubuka iindwendwe banokuvumela amatheko afanelekayo ngokokubona kwabo. Kwiimeko apho sifumana izikhalazo ngezi zindlu namatheko, okanye apho ezo ntlobo zamatheko zingafaneleki, siza kulandelela kuloo ndawo xa kuyimfuneko.
Ummelwane wam ngumbuki zindwendwe kwa-Airbnb. Ziziphi izinto ekufuneka ndizazile?
Imigangatho yenkqubo yeAirbnb Plus